कांंग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलले गरे बुल्दीखोला पुलको उद्घाटन – News Dainik
रश्मी १८ मंसिर २०७७, बिहीबार १३:५१ समाचार प्रतिकृया दिनुहॊस
काठमाडौं । नेपाली कांंग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बुधबार उद्घाटन गर्न नपाएको तनहुँ ब्यास नगरपालिकाको बुल्दीखोलाको पुल बिहीबार उद्घाटन गरेका छन् ।
पौडेल बिहीबार पुल उद्घाटन गर्न पुगेका थिए । बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पुल क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको बेला पौडेल पुल उद्घाटन गर्न पुगेका उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई ३ घण्टापछि छाडेको थियो ।
तर बिहीबार भने उक्त पुल उद्घाटनमा प्रशासनले अवरोध गरेन । बिहीबार कांग्रेसका कार्यकर्ताले बुधबार प्रहरीले गरेको व्यवहारको विरोधमा नाराबाजीसमेत गरेका थिए ।
अघिल्लॊ इलाम नगरपालिकामा भोलिदेखि निषेधज्ञा
पछिल्लॊ नायिका तथा मोडल रेश्मा घिमिरेले इन्गेजमेन्ट गरिन्
टीकापुर । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छ महिनामा ३९ हजार ३०० बढी सवारी साधन कारवाहीमा परेका छन् …
पठाओ चालक र यात्रुको दुवैको ५-५ लाखको बिमा
शुक्रबार सुनचाँदीको मूल्यमा गिरावट, तोलाको कति पुग्यो ?
रिङ रोडको १०.२ किलोमिटरखण्ड हरियाली बनाउँदै एनसेल
आज पनि बढ्यो सुनको भाउ, तोलाको कति पुुग्यो ?
आज पनि सुनचाँदीको मूल्यमा वृद्धि, तोलाको कति पुग्यो ?
१० माघ २०७७, शनिबार ११:१०
बनेपाको बम सेनाले डिस्पोज गर्‍यो, मंगलटारमा विष्फोट
१० माघ २०७७, शनिबार ०९:५५
जडीबुटीमा ग्यास बोक्ने बुलेट दुर्घटना, ट्याक्सीमा क्षति
१० माघ २०७७, शनिबार ०९:२६
तीनकुनेमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एकको मृत्यु
१० माघ २०७७, शनिबार ०८:२९
भारतबाट आएको कोभिशील्डले कसरी काम गर्छ ?
१० माघ २०७७, शनिबार ०८:०२
जुम्लामा तालिका नै सार्वजनिक गरेर लोडसेडिङ
५ माघ २०७७, सोमबार १२:३७
विद्युत् डिमान्ड शुल्क छुट आजदेखि कार्यान्वयन
५ माघ २०७७, सोमबार ०९:२२
४ माघ २०७७, आईतवार १०:२३
काठमाडौ उपत्यकाका २१ ठाउँमा आज बिजुली नआउने
३ माघ २०७७, शनिबार ०८:३०
सिंगटी हाइड्रोले माघ ४ देखि पहिलो चरणको आईपीओ निष्काशन गदै
२४ पुष २०७७, शुक्रबार १२:५४
कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइने व्यक्तिको विवरण सूचीकृत गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय
नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंकको वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न
ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा नख्खु क्षेत्रमा क्यूआर मार्फत नगद रहित कारोबार प्रवद्र्धन कार्यक्रम आयोजना
नेपाल इन्स्योरेन्सले १० प्रतिशत लाभांश दिने
२४ घण्टामा थपिए ३०२ जना कोरोना संक्रमित,७ जनाको मृत्यु
नेपाल बैंकको नयाँ एक्स्टेन्सन काउण्टर दोलखाकाे जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा